सबिता भण्डारीले न्याय नपाउदै भक्तपुरमा फेरी घट्यो यस्तो घटना (भिडियो सहित) – Sandesh Press
June 10, 2021 408
फुलमाया पनि काम्ने गर्थिन, मुना आफु पनि झारफुकको काम गर्ने गरेको बताउँछिन् । उनले फुलमायाको घरमा गएको बेलामा आफुमाथि यस्तो घटना भएको बताइन् । आफ्नो चेलाले घटनावारे जानकारी गराउन घरमा आए । त्यसपछि मुनाको छोरा गाउँलेलाई सम्झाउन थाले । छोरालाई पनि त्यसैगरी जाइलागे । अहिले छोरा सम्पर्कमा नभएको उनले बताएकी छन् ।मैले कहाँ गएर न्याय पाउनु ? अहिले सम्म मेरो छोरोका अत्तोपत्तो छैन । एउटै छोरा थियो । धेरै जना थिए । केही मान्छेको आवाज सुनेकाले उनीहरुलाई चिनेकी छु । अहिले सम्म घटना भएको यति समय भइसक्यो तर कसैले मेरो कुरा सुनेन ।
Prevसबिता भण्डारी प्रकरणबारे बल्ल डिएसपीको ड रलाग्दो खुलाशा ! त्यो अन्तिम रात यस्तोसम्म भएको रहेछ हेर्नुस
Nextअसारदेखि के के खुल्ने र के के बन्द हुन्छन् त ? यस्तो तयारी गर्दै छ सरकार ! हेर्नुहोस् ;
चर्चित नायक आकाश श्रेष्ठले पहिलो पटक सार्वजनिक गरे प्रेमिका